बजारमा ह्वात्तै घट्यो आलुको मुल्य, हेर्नुहोस कति पुग्यो ? – Nepal Online Khabar
काठमाडौ : सोच्नै नसकिने गरि घट्यो आलुको मुल्य ! आलुको ब्यबसायी खेती हुदा उत्पादनमा बृद्धि हुनु र नयाँ आलु बजारमा आएसँगै मुल्य घटेक हो । हुम्लामा आलुको मुल्य सस्तिएको छ ।
आलु खेती घरयासी प्रयोगका लागि गरिने भएको भएपनि पछिल्लो समय आम्दानी हुन थालेपछि आलुको ब्यबसायीक खेती सुरु भएको छ । हुम्लामा यो अबधि आलुको मुख्य सिजन सुरु भएको छ। ब्यबसायी आलु खेती गर्ने किसानको
संख्या बृद्धि भएपछि प्रतिश्प्रर्धाका आधारमा आलुको मुल्य घटेको किसानले बताएका छन्। यसरी किसानबाट किन्दा आलुको मुल्य प्रतिकेजी पैतीस रुपियाँ परेपनि बजारमा भने चालीस रुपियाँ पर्ने स्थानीय पेमा लामाले बताउदै केही समय अगाडीको तुलनामा आलुको मुल्य आधा घटेको बताए।
Prevसरकार र डा. केसीबीच सहमती लगत्तै सुर्य थापाले गरेको यस्तो ट्वीटले फेरि एकाएक तरङ्ग, कसलाई के भने ?
Nextनेता गुरुङ भन्नुहुन्छ : उच्च पदमा पुगेका नेता र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरौँ…सहमत हुनेले सेयर गर्नुहोस् ।